Ny fitsaboana maivana dia manampy amin'ny famoizam-po tsy amin'ny vanim-potoana | Sakafo Nutri
Fitsaboana mazava maivana dia fitsaboana ny karazana fahaketrahana fantatra amin'ny anarana hoe aretim-pihetseham-po (SAD), fa araka ny fanadihadiana natao vao haingana, dia mety hahasoa ny famoizam-po tsy fizaran-taona ihany koa.
Ny fampifangaroana ny hazavana amin'ny antidepressants dia niasa tsara tao amin'ny fitsaboana ny famoizam-po tsy fizaran-taona, aretina iray izay tsaboina amin'ny psychotherapy sy fanafody antidepressant, na eo aza izany, ny fizarana miverimberina dia tena mahazatra.
Ho an'ny fikarohana, vondron'olona iray manana famoizam-po tsy fizaran-taona dia nasaina hanambatra ny Prozac miaraka amina 30 minitra isan'andro amin'ny loharanom-pahazavana fotsy mamirapiratra. 60 isan-jaton'ny marary no nahita ny fihenan'ny soritr'aretin'izy ireo.
Hatramin'izao dia noheverina fa ny fitsaboana maivana dia nanamaivana ny SAD tamin'ny fanamboarana ny fikorontanana amin'ny famantaranandro anaty ny vatana vokatry ny fitomboan'ny haizina nitranga tamin'ny fararano-ririnina, saingy ity fandinihana vaovao ity dia manondro fa izany koa mahasoa neurotransmitter ati-doha, toy ny serotonin, izay misy fiatraikany amin'ny toe-po.
Na izany aza, ity fomba vaovao fitsaboana ny fahaketrahana ity dia mbola mampiseho vitsivitsy tsy fantatra, toy ny faharetan'ny fitsaboana ny hazavana mamirapiratra miampy Prozac. Etsy ankilany, ny famaranana ny fandinihana dia mamela ny fahafaha-miasa ihany koa ny fitsaboana jiro fotsy mamirapiratra nefa tsy mila antidepressants, izay raha hamafisina dia ho vaovao tsara ho an'ny olona ketraka, satria mamela azy ireo hanao tsy misy rongony na farafaharatsiny mampihena ny fihinanana azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » aretina » Fahaketrahana tsy miankina amin'ny vanim-potoana - Vokatry ny fitsaboana mavomavo fotsy mangirana
Torohevitra hampihenana ny tahan'ny transaminases